TORITENY Alahady 10 Septambra 2017 | FJKM Amboniloha
Daniela 3 : 13 – 18 / Marka 8 : 34 – 38 / II Timoty 1 : 6 – 12
Alahady natokana ho fizarana mari-pankasitrahana ireo mpampianatra nahavita ny fiofanana nandritra ny 5 taona “ Fanabeazana Kristiana”
Talohan’ny nandaozan’i Jesoa Kristy ny mpianany dia nametraka hafatra maro Izy mba hampianatra, hitory ny Filazantsaran’ny famonjena. Kristiana aho, natao ho ahy koa izany hafatra izany. Ahoana no fomba ahafahako mampita ny fiainana Kristiana manodidina ahy amin’ny maha Ray, Reny, mpanabe ahy sns…. ?
Izany fanontaniana izany no ezahina ho valina aka andraisantsika lesona avy amin’ny Tenin’Andriamanitra. Salamo 24 / Kolosiana 1 : 15-20
1- Aiza no misy ahy ary an’iza aho ? Inona no tanjon’Andriamanitra amiko raha napetrany honina eto aho ?
An’ I Jehovah ny tany sy izay rehetra eo aminy, izao rehetra izao sy ny mponina eo aminy , cf Salamo 24 : 1, an’Andriamanitra I Madagasikara sy izay monina eto araka izany, ary manana ny fomba sy ny kolontsaina amin’ny maha Malagasy ahy, nefa kosa efa nateraka indray noho ny amin’ny Jesoa Kristy ka nanjary nanana ny endrik’Andriamanitra, fomban’Andriamanitra cf Kolosiana 1 :15
Lesona : Ankoatry ny maha Malagasy ahy, andraikitra apetraka amiko amin’ny maha Kristiana ahy ny ho mpanandratra ny voninahitr’Andriamanitra ka haneho izany amin’ny fomba fiainako andavan’andro mifanitsy tsara amin’izay ambaran’ny Baiboly. (asa fivelomana, fitaizana, fitondran-tena, fisainana sy fomba fijery sns…)
2- Inona no tsy mety, inona no olana misy eo amiko sy Andriamanitra ?
Izay rehetra manaiky an’I Jesoa dia tokony manaraka io fenitra napetrak’Andrimanitra io eo amin’ny fiainany. Tsy izany anefa no mitranga fa manohitra izay lazain’ny Baiboly ny mpanara-dia an’I Kristy ka mandeha amin’ny sainy sy ny fahalalany. Vokany : mikorontana ny fiarahamonina, mahazo toerana satana. Sarona tanteraka ny voninahitr’Andriamanitra.
60% Malagasy dia Kristiana, ary afaka manandratra vavaka ho an’ny fireneny nefa tsy mahavaha ny olana ara politika, ara- piaraha monina, ara toe karena, ara –tokantrano ….
Satria tsy miaina araka ny sitrapon’Andriamanitra ny Malagasy , tsy manome voninahitra an’Andriamanitra ny fiainana asehony.
Fehiny : Tompon’andraikitra eo anatrehan’Andriamanitra aho amin’ny zava miseho rehetra eo amin’ny fiainako, sy ny mpiara belona amiko. Azoko an-tsaina ve ny mety fihatsaran’ny fiainako sy ny mpiray tanindrazana amiko raha tena hita ety amiko ny endrika sy ny fahatsaran’Andriamanitra ka hitaiza azy ireo amin’ny fomba Kristiana ? Tsy maintsy misy ny olana nefa efa planin’Andriamanitra hatramin’ny voalohany ny Famonjena cf Jaona 16 : 3
Jiro aho, sira ihany koa, ka mila mizara fiainana ho an’ny olona rehetra mba handraisany ny famonjena ary koa ahitany ny fahatsaran’Andriamanitra. Ny fitambaran’ny fahazavana entintsika Kristiana tsirairay avy no mitondra famonjena ho an’ity Madagasaikara malalantsika ity .
Dr. MwayaWaKitavi (Misionera, Christian Reformed World Mission, Kenya)
Catégories :	Toriteny	/ par AnjGab 15 septembre 2017